Malunga nathi - Jinan Mingchang Ukwakha Co., Ltd.
Jinan Mingchang Ukwakha Co., Ltd. yasekwa ngo-2008, iingcali kwimveliso yezahlulo oluzenzekelayo, izahlulo Machining, nasekuqiniseni kunye iindawo eyahlulayo, intloko Seal, Spring, isixhobo Electric kunye nezinye iimveliso zesinyithi. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ezisefashonini kunye ezisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso eyahlukeneyo.
Ukuveliswa kwe-MC kule minyaka idlulileyo kuye kwahambelana "nomgangatho weemveliso ukuze uphile, ukuthembeka kunye neenkonzo zophuhliso" ngeenjongo zeshishini. Ukuzibophelela ekuboneleleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezisemgangathweni. Yiba neqela elizimeleyo, elizinikeleyo kulawulo loyilo, kuyilo lweemveliso, ukwenziwa kwesikhunta, inkqubo yokuvelisa, kwinkalo nganye kunye neenkqubo kuvavanywa ngokungqongqo kunye nolawulo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo yemveliso kunye nolawulo kunye nokuhlola, i-MC isete eyayo inkqubo yolawulo lomgangatho kwaye yaphumelela i-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni ka-2008. I-MC isoloko iphumeza umxholo wokudalwa kwexabiso labathengi kwiimveliso ezilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abohlukeneyo, kwaye ngokuqhubekayo inikezela abathengi ngezisombululo kunye neengxaki zobuchwephesha. Ukuqhubeka kokuhlola kunye nokwenza izinto ezintsha, kunye nokugqwesa.
· I-China iKhokela kwiTekhnoloji yokuvelisa
· Umgangatho ophezulu kunye nexabiso loKhuphiswano
· Amandla amakhulu okuvelisa
· Ukuhanjiswa okukhawulezayo
· Amava eeMveliso zeminyaka eli-13
· Ukuthengisa okuGqwesileyo kunye neNkonzo yokuThengisa emva
· Iimveliso zethu zithengiswa kwihlabathi liphela
· Izixhobo eziphambili kunye neetalente ezigqwesileyo